दशैं आउनै लाग्दा भारतले नेपालमाथि फेरी लगायो प्रतिबन्ध, तेब्बर गुणा बढ्यो सामानको मूल्य — Imandarmedia.com
१चीनबाट आयो अर्को ड’रलाग्दो खबर, नयाँ संक्रमणले थुप्रै मानिस बिरामी, यस्ता छन लक्षणहरु
२के भारतसँग डराएकै हुन् त ओली ? किन लगाए नयाँ नक्सा समेटिएको पुस्तक वितरणमा रोक
३भ्रमपूर्ण सूचना प्रवाह विश्वव्यापी चुनौती- राष्ट्रपति
४काभ्रेकी कोरोना संक्रमित महिलाको उपचारका क्रममा मृत्यु
५कतारमा रहेका नेपालीहरुले काम परिवर्तन गर्न चाहनुहुन्छ, अब यसरी सजिलै गर्न सकिन्छ काम परिवर्तन
६मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्दै, यस्ताे छ तयारी
७राष्ट्रसंघलाई सशक्त, निष्पक्ष र विधिमा आधारित निकाय बनाउनुपर्छ- प्रधानमन्त्री ओली
८पुनर्निर्माण प्राधिकरणको अवधि अझै एक वर्ष थप्न सिफारिस
९कोरोना संक्रमणका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या बढ्दो, एकैदिन १६ जनाको मृत्यु
१०बत्ति जान थालेपछि ऊर्जामन्त्रीकाे सचिवालयले मुख खाेल्याे, दियाे यस्ताे प्रष्टीकरण
११निषेधाज्ञा खुलेपछि बैंकको ऋण लगानी बढ्यो, एक हप्तामा ९ अर्ब ऋण, २१ अर्ब निक्षेप
१२एकाएक किन स्थगित भयो नेकपा हाइकमाण्ड बैठक ?
५अष्टलक्ष्मीलाई शीर्ष नेताको रहस्यमय फोन, कारण थाहा पाएपछि नेकपाभित्र खैलाबैला सुरु
६आजैदेखि लागु हुनेगरी ओली सरकारले गर्यो फेरि यस्तो निर्णय, जनता झनै मारमा पर्ने निश्चित
७भर्खरै सकियो सकियो ओली-प्रचण्डबीचको बैठक, आज बल्ल भयो यस्तो सहमति
८काेराेनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या बढेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले दिए यस्तो गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति, किन भने यस्तो ?
९गृहमन्त्री बादलसहितको टोली लिएर बागलुङ उडेको हेलिकोप्टर अन्तै पुग्यो, कहाँ केछ अवस्था ?
१०कुलमान घिसिङलाई पुनर्नियुक्ति नदिइएकाेबारे ओलीले मन्त्रिपरिषद बैठकमा के भने
११अन्तत: ओली सरकारले तीन वर्षपछि हटाइयो प्रतिबन्ध, हेर्नुहोस पत्रसहित
१२नेपालमा फेरी भूकम्पको शक्तिशाली धक्का, मान्छेहरूको भागाभाग, कहाँ हो केन्द्रबिन्दु ?
दशैं आउनै लाग्दा भारतले नेपालमाथि फेरी लगायो प्रतिबन्ध, तेब्बर गुणा बढ्यो सामानको मूल्य
काठमाडौं । अब दशैँ आउन १ महिना अमात्रै बाकी छ । तर छिमेकी राष्ट्र भारतले समान आयतमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । भारतले प्याजको निर्यात रोकेपछि नेपाली बजारमा प्याजको मूल्य एक सातामै तेब्बर भएको छ । भारत सरकारले निर्यात रोकेपछि बजारमा अभाव हुने आशंकाले व्यापारीले प्याज लुकाउने तथा उपभोक्ताले अनावश्यक सञ्चित गर्न थालेपछि प्याजको मूल्य आकाशिएको हो ।
एक साताअघि प्रतिकेजी ४० रुपैयाँ रहेको प्याजको मूल्य बढेर अहिले एक सय रुपैयाँसम्म पुगेको छ । बजारमा अहिले प्याजको अभावसमेत हुन थालेको पाइएको छ ।भारतले प्याज निर्यात रोकेको भन्सार विभागले जानकारी दिएको छ ।
भारतबाट २९ भदौदेखि प्याज नआएकाले नेपालमा अभाव भएको व्यापारीहरू बताउँछन् । भारतबाट प्याज आउन छोडेपछि मूल्य बढ्न गएको व्यवसायीले जानकारी दिएका छ । यसअघि सन् २०१९ मा पनि भारत सरकारले प्याजको निर्यात बन्द गरेको थियो । उत्पादन कम भएपछि भारतले प्याज निर्यातमा रोक्ने गर्छ ।
यसैबीच निषेधाज्ञाको विरोधमा कोटेश्वरका व्यापारीहरुले प्रदर्शन गरेका छन् । लामो समय भइसक्दा पनि अझै निषेधाज्ञा पूर्ण रुपमा नहटाइएको भन्दै कोटेश्वर व्यवसायी संघले मंगलबार विहान प्रदर्शन गरेको हो । अब निषेधाज्ञा पूर्णरुपमा खुलाई सहज रुपमा व्यापार व्यवसाय गर्न पाउनुपर्ने संघको माग छ ।
करिब ४ महिना लकडाउन र त्यसपछिको निषेज्ञाधाका कारण व्यवसायीहरु निकै ठूलो समस्यामा फस्न लागेको संघका अध्यक्ष सरोज थापाले बताए । सधैं घरभित्र थुने कोरोनाभन्दा पनि भोकले मर्ने अवस्था आउने भन्दै अब सहज बनाउनु पर्ने अध्यक्ष थापाको माग छ ।
बन्दाबन्दी अवधीभरको बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको ब्याज मिनाहा गर्नुपर्ने, करको जरिवाना मिनाहा गर्नु पर्ने घरभाडामा सहुलियत दिनु लगायतका मागहरु संघले अघि सारेको छ ।
बन्दाबन्दीका कारण व्यवसायीहरु समस्यामा परेको भन्दै विभिन्न मागहरु राखेर नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघ पनि आन्दोलनमा छ । केही दिनयता महासंघले सरकार तथा विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरुलाई भेटेर ज्ञापन पत्र बुझाउँदै आएको छ ।
महासंघले केही दिनअघि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठलाई भेटेर आफ्ना मागहरु पूरा गर्न ध्यानाकर्षण गराएको थियो । त्यसपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर पनि आफ्नाहरु पूरा गराउन भूमिका खेलिदिन आग्रह गरेको थियो ।
सोमबारमात्रै पनि महासंघले पूर्वप्रधानमन्त्री तथा जनता समाजवादी पार्टीका नेता डा. बाबुराम भट्टराईलाई भेटेर आफ्ना मागहरुबारे जानकारी गराएको थियो ।
के भारतसँग डराएकै हुन् त ओली ? किन लगाए नयाँ नक्सा समेटिएको पुस्तक वितरणमा रोक
भ्रमपूर्ण सूचना प्रवाह विश्वव्यापी चुनौती- राष्ट्रपति
कतारमा रहेका नेपालीहरुले काम परिवर्तन गर्न चाहनुहुन्छ, अब यसरी सजिलै गर्न सकिन्छ काम परिवर्तन
राष्ट्रसंघलाई सशक्त, निष्पक्ष र विधिमा आधारित निकाय बनाउनुपर्छ- प्रधानमन्त्री ओली
बत्ति जान थालेपछि ऊर्जामन्त्रीकाे सचिवालयले मुख खाेल्याे, दियाे यस्ताे प्रष्टीकरण
अचानक तीन तले भवन भत्किएर १० जनाको मृत्यु, प्रधानमन्त्रीले दिए यस्तो प्रतिक्रिया
हिँड्दाहिँड्दै अचानक बेहोस भएर ढलेका डाक्टरमा यस्तो पुष्टि भएपछि चिकित्सकहरू हैरान